အိုင်တီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအသစ်နားလည်သဘောပေါက်ထားရပါမည် / GFFT ၏နယူးကွန်ယက်ကိုတီထွင်ဆန်းသစ်မှုမြှင့်တင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီပေးပါ, ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကနေသူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ပေးရန် - နယူး Presse.de သတင်းနှင့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
အိုင်တီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအသစ်နားလည်သဘောပေါက်ထားရပါမည် / GFFT ၏နယူးကွန်ယက်ကိုတီထွင်ဆန်းသစ်မှုမြှင့်တင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီပေးပါ, ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကနေသူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ပေးရန်
3. ဇွန်လ 2017 presseportal အော်တို, တည်ဆောက် & အသက်ရှင်သော, ကွန်ပျူတာ, ဂျာမန်သတင်းစာလွှတ်ပေးမှု, အီလက်ထရွန်းနစ်, ဘဏ္ဍာရေး 0
အိုင်တီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအသစ်နားလည်သဘောပေါက်ထားရပါမည် / GFFT ၏နယူးကွန်ယက်ကိုတီထွင်ဆန်းသစ်မှုမြှင့်တင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီပေးပါ, ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကနေသူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ပေးရန် / “Wir müssen Cybersicherheit neu denken”, fordert David Veith, Leiter des GFFT-Netzwerks IT-Security. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126815 / Die Verwendung dieses Bildes ist für …
Tel ။: 06101/95 49 80
၏မူရင်းအကြောင်းအရာ: GFFT Innovationsförderung GmbH, လက်ရှိအားဖြင့်မှတဆင့်ကူးစက်သောသတင်း
ဒါကသတင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကွန်ယက်မှကြွလာ : http://www.presseportal.de/pm/126815/3651286
Bye-Bye, Paris! Bye-Bye, ယူအက်စ်အေ! | Telepolis
▷ YOU Summer Festival: Style up your life 21. မေ 2019
▷ Lidl ist beliebtester Lebensmittel-Discounter / Kunden wählen Lidl bei Umfrage des … 21. မေ 2019
▷ Lust auf Sonne: ALDI SÜD startet mit Beachwear von Michelle Hunziker in die Sommer-Saison 21. မေ 2019
Russland-Affäre: Ex-Berater von Trump muss nicht im Kongress aussagen 21. မေ 2019
Mercedes’ “Experimentalsicherheitsfahrzeug” 2019 | heise Autos 21. မေ 2019